बजेट किन क्रान्तिकारी बनेन ? | गृहपृष्ठ
Home पाठक विचार बजेट किन क्रान्तिकारी बनेन ?
on: २० जेष्ठ २०७५, आईतवार ०६:१५ पाठक विचार
बजेट किन क्रान्तिकारी बनेन ?
झण्डै दुई तिहाइ बहुमतमा बनेको वाम सरकारले आव २०७५/७६ को बजेट सार्वजनिक गरेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा निकै चर्चा र बहस हुन थालेको छ । बजेटप्रति बढी जनअपेक्षा भएका कारण यसले जनताको उत्साहअनुसार सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने धेरैको भनाइ छ । चुनावअघि वाम गठबन्धनले निकै ठूला आश्वासन र लोभलाग्दा नारा दिएका थिए । राष्ट्रवादको चर्को नारा उराल्नुका साथै हरेक क्षेत्रमा बजेट बढाउने र सुविधा थप्ने कुरा बजेटमा परेका थिए । मनमोहन अधिकारी प्रथानमन्त्री भएको बेलामा पहिलोपल्ट एमालेको सरकारमा गएको थियो । त्यतिबेला ऊ अल्पमतमा थियो तैपनि बजेट भाषणमा निकै क्रान्तिकारी कुरा भए । अहिले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत छ । ५ वर्षसम्म सरकार ढल्ने कुनै सम्भाव नै छैन । त्यसैले यसपटक क्रान्तिकारी बजेट आउँछ, जनताले पाउने सुविधा निकै बढ्छ, विकास र निर्माणका लागि ठूलो बजेट तयार हुन्छ भन्ने सोच थियो ।
त्यस्तै सङ्घीय बजेट भएकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेटको ठूलो अंश पाउँछन् भन्ने आशा पनि थियो । अझ केन्द्रमा जुन पार्टीको सरकार छ स्थानीय र प्रदेशमा पनि त्यही पार्टीको बाहुल्य भएकाले यस्तो अपेक्षा थियो । तर, ती कुनै पनि कुरामा यो बजेटले ध्यान दिएको पाइएन । त्यसले यो बजेट पनि पुरानै कार्यक्रम र पुरानै बजेटकै कर्मकाण्डी निरन्तरता हो भन्ने सबैलाई लागेको छ । वाम बजेट जति बढी प्रगतिशील बन्नुपर्ने हो, त्यो नबन्दा जनतामा सकारात्मक अवस्था ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि छैन । कुनै पनि नयाँ खालका योजना र जनचाहनाअनुसारका गम्भीर कुराहरू बजेटमा नपर्नु दुर्भाग्य नै हो ।
बजेटबाट एकातिर कर्मचारीहरू निराश भएका छन् भने अर्कातर्फ वृद्धवृद्धाहरूमा पनि खासै उत्साह आएन । साथै, वामगठबन्धनले चुनाव लड्दै गर्दा वृद्धवृद्धालाई आकर्षक रूपमा दिने भनिएको वृद्धभत्तामा समेत कुनै परिवर्तन गरिएन । नगदमा प्रत्यक्ष रूपले बुझिने भत्ता नै ज्येष्ठ नागरिकका लागि महत्वको विषय हुने भएकाले उनीहरूले बीमा आदि सुविधाप्रति कुनै चासो देखाएनन् ।
अर्थमन्त्रीले यसपटकको बजेट आफूले कार्यान्वयनमा लैजान सहज हुनेगरी, काम गर्दा कुनै जोखीम लिन नपर्ने गरी, ठूलो आलोचनाको सामना गर्नु नपर्ने गरी सबैलाई समेट्न र रिझाउन बजेट तयार पारेको हो कि भन्ने देखिन्छ । यो बजेट तुलनात्मक रूपमा खासै महत्त्वाकाङ्क्षी पनि नरहेको आभास पाइनुले अर्थमन्त्री बजेट निर्माणमा निकै सजग भएका हुन् कि भन्न सकिन्छ । व्यापक जनविरोध हुँदाहुँदै पनि सांसदहरूलाई ४ करोड बजेट विनियोजन गरियो । यसले एकपटक चुनाव जितेपछि सधैं चुनाव जितिरहनुपर्छ भन्ने सोचाइलाई पुष्टि गर्छ । आफ्नोअनुकूलका क्षेत्रमा बजेट बाँड्न पाउने यो व्यवस्था एक प्रकारको भ्रष्टाचार भन्न सकिन्छ । तर, यसलाई वैधानिक बनाइयो । विकास निर्माण गर्ने प्रदेश तथा स्थानीय तहहरू र त्यहाँ रातदिन खटिएर काम गरेका जनप्रतिनिधिहरू हुँदाहुँदै जनचाहनाविपरीत यसरी सांसदलाई बजेट दिनु पक्कै पनि गलत हो । यसअघि विवादित प्रकारले रकम खर्चिएका सांसदहरूले यो पटक पनि रकमको सदुपयोग पक्कै गर्ने छैनन् । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूलाई यसरी रकम दिँदा अन्य तहका सांसदहरूले बजेट माग्न र दिनु स्वाभाविक हुन्छ । जसरी एमालेको नौमहीने सरकारको भरतमोहन अर्थमन्त्री हुँदाका बखतको बजेट आउँदा जनता उत्साहित थिए र एमालेले लोकप्रियता प्राप्त गरेको थियो, त्योअनुसार वामपन्थीहरूको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले जनतालाई उत्साहित गराउन सकेन । यसपटकको वाम बजेटले जनतालाई निकै उत्साहित पार्ने नारा तथा बजेट ल्याउने अपेक्षा थियो । त्यो पूरा नहुँदा जनताको चित्त दुःखेको छ ।
यसपटक पनि विभिन्न खालका सवारीसाधन, मदिरा, चुरोट सुर्ती आदिमा मूल्य बढाइएको छ । मनोरञ्जन वा स्वास्थ्य सेवाकरको नाममा यति बढी ढाड नै सेक्ने गरी कर बढाउँदा पनि जनता चुप लाग्नुबाहेक अरू के नै गर्न सकिन्छ र ?